I-FAQs-Ushishino lweWanhe kunye noRhwebo Co, Ltd.
Loluphi uhlobo lwemveliso yengca eyenziweyo?
Ingca yomhlaba yegadi
Ingca yezemidlalo yebhola ekhatywayo, intenetya, igalufa, ihoki njalo njalo.
Ikhaphethi yengca yentengiso yokubonisa
Ingca eyenziweyo yokuhombisa uphahla
Ingca enemibala kunye nazo zonke izixhobo zokufaka
Kuthekani ngemijelo yamanzi?
Akukho sidingo sokukhathazeka malunga nomsele wamanzi. Ingca eyenziweyo inyibilika ngokupheleleyo kwaye amanzi emvula ayayidlulisa njengoko ingca eyenziweyo inenkxaso exhaphakileyo.
Ngaba ingca eyenziweyo ikhuselekile ebantwaneni nakwizilwanyana zasekhaya?
Uvavanyo olungqongqo luyenziwa ukuqinisekisa ukuba azinazo naziphi na izinto eziyingozi ezenza ukuba zikhuseleke ebantwaneni nakwizilwanyana zasekhaya. Ingca eyenziweyo ipasile isiqinisekiso sovavanyo FIKELELA.
Ukuba sinesitokhwe esenziwe ngengca, i-MOQ inokuba ziimitha zesikwere ezingama-500. Ukuba asinayo imfuyo yeGrass eyenziweyo, i-MOQ mayibe nobuncinci beemitha zesikwere ezingama-500. Inkxaso yesampula yasimahla, inokwenziwa
Ungayikhetha njani ingca eyenziweyo?
Singacebisa eyona ngca ingeyiyo eyimfuneko ngokweemfuno zabaxhasi bethu. Ngaphezu, iqela lethu zobugcisa unikezelo engaguqukiyo iitalente kunye nobuchwepheshe entsha,
imveliso esingabizi ingamkelwa, leyo ukwanelisa ngokupheleleyo iintlobo ezahlukeneyo iimfuno zabathengi '. Ukugxininisa ekuboneleleni ngesisombululo esenzelwe wena kubathengi, nazo zonke iinkcukacha zesayensi kunye nokuzimisela kwinkonzo, ukwenza inkonzo egqibeleleyo.
Ngaphambi kokuba wenze iodolo, ndingatyelela umzi-mveliso wakho?
Ewe wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu. Nceda usazise ishedyuli yakho yokuhamba ngaphambi kwexesha. Singalungiselela ukukuthwala ehotele okanye kwisikhululo seenqwelomoya.
Ingca eyenziweyo, Ingca yebhola eTurf, Ukuxelisa Ikhaphethi Yengca, Ingca yeGalufa eyenziweyo, Ingca yokwakheka komhlaba yokuBekwa komhlaba, Umhlaba webhola ekhatywayo we-Astro Turf,